तीन बिरामीको ह त्या गरेकी नर्स भन्छिन्, ‘कुनै पश्चाताप छैन’ - Khabar Nepali
होमपेज / अन्तर्राष्ट्रिय / तीन बिरामीको ह त्या गरेकी नर्स भन्छिन्, ‘कुनै पश्चाताप छैन’
उपचारको क्रममा तीन बिरामीको ह’ ‘त्या गरेको आरोप लागेकी जापानकी एक पूर्वनर्सले आफ्नो अ’पराध स्वीकारेकी छन् । उनले सन् २०१६ मा आफूले श्रृंखलावद्ध तरिकाले तीनजना बिरामीको निर्ममतापूर्व ह’ ‘त्या गरेको स्वीकारेकी हुन् । नर्सले बिरामीको ह’ ‘त्यापछि पनि आफूलाई कुनै पश्चाताप नभएको बयान दिएकी छन् । आफूले बिरामीको ह’ ‘त्या गर्नुको कारण खुलाउँदै उनले भनेकी छन्, ‘म मेरो पेशाबाट शा’री’रिक र मा’न’सि’करुपमा थकित भइसकेकी थिए । आफू म’रे’र अरुलाई बचाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि मैले तीनै बिरामीको ह’ ‘त्या गरे । गल्तीबिना मैले मेरो काम गरेको मात्र हो । यसमा मलाई कुनै पश्चाताप छैन ।’
घटना स्वीकारेकी उनलाई हाल योकोहामा जिल्ला अदालतमा राखिएको छ । अदालतले पीडितका आफन्त, आरोपितका बुवाआमा र अन्य कर्मचारीको बयानका आधारमा सजाय सुनाउने बताइएको छ । उनलाई कम्तीमा पाँच वर्षदेखि ज’न्मकैदको सजाय हुन सक्ने अदालतले जनाएको छ ।
को हुन् ती नर्स ?
जापानको योकोहामास्थित ओगुची अस्पतालमा कार्यरत थिइन्, ३४ वर्षीय आयुमी कुवोगी । सन् २००८ मा नर्सको प्रमाण पत्र पाएकी उनले सोहि वर्षदेखि आफ्नो करियर सुरु गरिन् । करियरसँगै उनी विरामीको सेवामा ८ घण्टाभन्दा लामो समयसम्म खटिने गर्थिन् । सुरुवाती चरणमा बिरामीको राम्रो हेरचाह र उपचार गर्ने आयुमी तोकिएको समयभन्दा लामो समयसम्म बिरामीको सेवामा समर्पित हुन्थिन् । उनले गरेका कतिपय उपचार सफल बन्थे भने कतिपय असफल । असफल उपचारपछि उनले बिरामीको ज्यान जोगाउन असमर्थ हुन्थिन् । आफूले गरेको उपचार असफल बनेपछि आयुमी डि’प्रेस’नको सि’कार बनेकी थिइन् । डि’प्रे’स’नको उपचारस्वरुप आयुमीले निदाउने औ’ष’धि से’वन गर्ने गरेकी थिइन् ।
असफल उपचारपछि आयुमीलाई सन् २०१५ मा ओगुची अस्पतालमा आगामी २५ वर्षको लागि खटाइएको थियो । जहाँ उनीकहाँ उपचार गर्न आउने अधिकांश बिरामी बुढापाका र दिर्घकालीन रोगी हुन्थे । उनको डिप्रेसन झनै बढेको थियो ।
यसरी भएको थियो ह’ ‘त्या
उपचारको लागि ओगुची अस्पतालमा भर्ना भएका तीन जनाको ज्या’न जाने गरी भएको सो घटना सन् २०१६ सेप्टेम्बरमा भएको थियो । तिनै बिरामीलाई एक महिनाको अन्तरालमा मा’ ‘र्ने योजना बनाएको आरोपित नर्सले बताएकी छन् । आफ्नो पेशाबाट थाकेकोले बिरामीको सलाइनमा डि’ट’र्जे’न्ट सो’डा मि’साएर तिनवटै बीरामीको ह’ ‘त्या गरेको अदालतसामु बयान दिएकी छन् । ‘पेशाको कारण म थकित थिए । ह’ ‘त्या गरिसकेपछि मेरो शरीर र म’स्ति’ष्क दुवैलाई राहत मिलेको थियो । त्यसैले मलाई अझैपनि कुनै पश्चाप छैन’ अदालतसँगको बयानमा उनले भनेकी छन् ।
नर्स कुवोगीले ह’ ‘त्या गरेका दुई बिरामी ८८ वर्षका थिए भने एक बिरामी ७८ वर्षका थिए । तत्कालिन समयमा सो घटनाले जापानमा निकै चर्चा कमाएको थियो । उनले आफूले गरेको अ’परा’ध सन् २०१८ मा स्वीकारेकी थिइन् । यद्यपि मा’नसि’क रो’ग डि’प्रे’स’नको कारण उनले बिरामीको ह’ ‘त्या गरेको भन्दै अदालतले ह’ ‘त्याको सजाय सुनुवाइमा ढिलाइ गर्दै आएको थियो ।
अदालतले उनको अ’परा’धको सजाय आगामी नोभेम्बरमा सुनाइने बताइएको छ । श्रोत अन्नपूर्ण पोष्ट
८.कट्रिनाले आफ्नो विवाहमा के सलमानलाई निम्ता दिइनन् ? सलमानको बहिनी अर्पिताले खोलिन् रहस्य